ရိပ်သာသို့ ဝေယာဝေစ္စဒါနပြုတခေါက် | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Copy/Paste » ရိပ်သာသို့ ဝေယာဝေစ္စဒါနပြုတခေါက်	15
Posted by မဂွတ် ထော် on Jul 16, 2012 in Copy/Paste | 15 comments
July 15.7.2012 နေ့မှာပေါ့ကျွန်မတို့ရုံးမှမန်နေဂျာနှင့်သူငယ်ချင်းများရိပ်သာသို့ကုသိုလ်ပြုလုပ်ရင်း
၄နာရီခွဲကိုသွားကြမယ်ဆိုပီးပြောထားကြပါတယ် ။နိုးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကလာနိုးတော့မထချင်ပါဘူး ဒါပေမဲ့
ဟင်းရွက်နှင့်ချက်စရာများသွားရောက်ဝယ်ကြပါတယ် ကျွှန်မတို့ဖွဲ ဟင်းချက်စရာများသွားဝယ်နေတုံးကိုဘုရား
၀ိုင်းထဲသို့တံမျက်စည်းများလှည်းကြပါတယ် ။ လှဲပီးချိန်မှာ ဟဲ..ဟဲ ၀ါသနာလေးပါတော့သူငယ်ချင်းများနှင့်
ရိပ်သာမှ ရှိတဲ့ဝေယာဝေစ္စကုသိုလ်ရှင်တွေလဲအရမ်းပင်ပန်းကြပါတယ် ကျွှန်မတို့သူငယ်ချင်းတစုလဲဝိုင်း
လျှောက်ပီးထမင်းစာလဲဇွန်းသံပုဂံ မကြားရပါဘူးတော်ကိုတိဆိတ်ငြိမ်သက်နေပါတယ်ကြည်ကျွှန်မတို့အဖွဲ့
လောက်ဆေးရပါတယ် မှန်တာပြောရရင်ဒါကုသိုလ်တော်ရတယ်လို့တော့ထင်ပါတယ် ကျွှန်မတော်ရွံတတ်
တဲ့လူပါစိတ်ထဲကနေအော်ငါ ကုသိုလ်လုပ်တာပါလေလို့ ကျွှန်မ မရွံတော့ပါဘူးကို့ကိုယ်ကိုပဲဆုံးမပီးဆေး
ပျော်လဲပျော်ပါတယ် ကိုယ်ကိုတိုင်လှူတာမဟုတ်ပေမဲ့ဝေယာဝေစ္စ ကုသိုလ်လုပ်ရတာတော်ပျော်ဖို့ကောင်းပါ
တယ်လူငယ်တွေနေနဲ့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က လူကြီးများကုသိုလ်ဒါနပြုကြတဲ့ခါတတပ်တအားဝိုင်းဝန်းကူညီ
မဂွတ် ထော် has written6post in this blog.
View all posts by မဂွတ် ထော် →	Blog
မမ အညာသူ says: သာဓု သာဓု သာဓု………………..ပါကွယ်
ဇောက် ထိုး says: အညာသူအတိုင်းဖြစ်ပါ၏ အညာသူအတိုင်းဖြစ်ပါ၏။ အညာသူအတိုင်းဖြစ်ပါ၏။
မဂွတ် ထော် says: ဘာကိုလဲ ဦးဇောက် …P
ကြောင်ကြီး says: သာဓု သာဓု သာဓု …ဒါနဲ့ ဂွက်ထော်က စင်ဂယ်လ်လား…။ ရွာထဲမှာ သူတော်စင်အောင်ကြူးဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဂျီးတဦးရှိတယ်။ သူ့ဝေယျာဝစ္စ လုပ်မပေးဂျင်ဗူးလား။။ ရွာထဲက ပုရ်ှလေးဆို အဲသလိုဆည်းကပ်ရင်းနဲ့ လုပ်ငမ်းရှင်သူဌေးမဂျီးဖြစ်သွားတယ်။ မိုးစက်ဆိုတဲ့ ခလေးမကတော့ မာန်နေဂျာဂျီးဖြစ်သွားသတဲ့…။
Moe Z says: ဦးကြောင်တော့ BBQ ဖြစ်ချင်ပြီထင်တယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2697
pooch says: ဂါးးးးးးးးးးးးးး …………….ကြောင်ပါးဝတယ်ဆိုတာဒါမျိုးကို ခေါ်တာနေမှာ ။
ဒီကြောင်က ရိုးရိုးကြောင်မဟုတ်ဖူး ။
အရေခွံဆုတ် ဆားဆနွင်းနယ် မီးကင်ဖို့ရာတော့ နီးနေပြီ။ ဦးကြောင် ကြပ်ကြပ်သတိထား…….
မောင်ပေ says: မပုရှ် ကွန်မင့်ကို ဖတ်ပြီး
မဝံ့မရဲလေးနဲ့ အူးကြောင် ကွန်မင့်ကို ဆက်ပါရစေ
အူးကြောင် ဒီမှာ မရှိလို့သူ့ အတွက် ဝေယျဝစ္စလုပ်ပေးချင်သပ ဆိုရင်
အူးကြောင် တပည့် မောင်ပေ ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း
မောင်ပေ says: ကျုပ်လဲ
သာဓု သုံးကြိမ် ခေါ်သွားပါတယ်
ဦးဦးပါလေရာ says: သာဓုခေါ်ပါတယ်ဗျာ-
သီလဆိုတာက ကောင်းစွာဆောက်တည်ခြင်း/ကောင်းစွာစောင့်ရှောက်ခြင်း လို့နားလည်နိုင်ပါတယ်။
သီလမှာ မလုပ်သင့်တာကိုမလုပ်အောင်စောင့်ရှောက်တဲ့ ရှောင် သီလ နဲ့
လုပ်သင့်တာကို အားထုတ်လုပ်ကိုင်တဲ့ ဆောင် သီလ ဆိုပြီး
Lwin Aung says: Tha Du, Tha Du, Tha Du.
You and your friends should go to there for meditation at least ten days.
mamanoyar says: မမဂွတ်ထော်ရေ
ko khin kha says: ငွေကြေးအသပြာပေးလှုမှ ဒါနပြုတာမဟုတ်ပါဘူး လုပ်အားဖြင့် ဝေယျာဝစ္စကုသိုလ်ပြုလည်း လုပ်အားဒါန ဖြစ်ပါ၍ အမဂွက်ထော်ရေ သာဓုခေါ်ပါတယ်ဗျာ။
အလင်းဆက် says: သာ ဓု ပါဗျာ…သာ ဓု သာဓု….
သားဦးမြေးဦး၊ ၀မ်းတွင်းရူး says: သာဓုပါဗျ—-
မဂွက်ထော်ရေ ပန်းကန်ဆေးပါတယ်လို့ ပြင်စေချင်ပါ၏။
snow white says: မမ ကောင်းမှုလုပ် ရသမျှ ရသည့်အကျိုးကျေးဇူးများလည်း စနိုးနှင့်တကွ ရွာသူရွာသားအပေါင်းလည်းရကျပါစေလို၏ ။။။။။။မမဂွတ်ထော်သာဓု သုံးကြိမ်ခေါ်တယ်နော် အဲ့လိုရိပ်သာတွေ မှာ သွားပြီးကုသိုလ်ပြုရင် လေ ပန်းကန်ဆေးမယ့်နေရာက တော်တော်များများက မဆေးချင်ကျဘူး စနိုးတို့တော့ ရရာကုသိုလ်ယူချင်တာနဲ့ စနိုးတို့ရိပ်သာမှာ လုပ်အားပေးသွားရင် ပန်းကန်ဆေးတဲ့နေရာဘဲယူရတာ များတယ် မမဂွတ်ထော်လည်း ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ ဆေးပေးခဲ့လို့ ကုသိုလ်ရမှာ ပါ သာဓုပါ နော်။။